Vaovao - Ny indostrian'ny fantsom-plastika vaovao any Shina no manana taha ambony indrindra eto an-tany
Ny indostrian'ny fantsom-plastika vaovao any Shina dia manana taha ambony indrindra amin'ny fitomboana eran'izao tontolo izao
Hatramin'ny taona 2000, laharana faharoa manerantany ny famokarana fantsom-bokatra plastika any Sina. Tamin'ny taona 2008, nahatratra 4,593 tapitrisa taonina ny fatran'ny fantsom-bokatra plastika nataon'i Shina. Tao anatin'ny folo taona lasa, ny indostrian'ny fantsom-plastika any Shina dia nivelatra haingana. Ny vokatra dia nitombo hatramin'ny 200.000 taonina tamin'ny taona 1990 ka hatramin'ny 800.000 taonina tamin'ny taona 2000, ary nitazona ny taham-pitomboana 15% isan-taona.
Ny fampidinana any ambany ny akora plastika HDPE dia misy fantsona famatsian-drano any ivelany, fantsom-pivoahana nalevina, fantsom-palitao, famatsian-drano ary fantsom-pivoahan'ny rano, sns. Ny ankamaroan'ireo rindranasa any ambany ireo dia misy ifandraisany mivantana amin'ny indostrian'ny trano sy tany. Ny data dia nofidina tamin'ny taona 2000-2008 Ao amin'ny fanadihadiana, hitanay fa misy fifandraisana tsara eo amin'ny indostrian'ny fantsom-plastika sy ny faritra vita amin'ny trano sy tany.
平均 Ny tahan'ny fisondrotan'ny fantsom-plastika PPR sy PE amin'ny ho avy dia ho avo kokoa noho ny indostrian'ny fantsona: Amin'izao fotoana izao, ny ankamaroan'ny fantsom-plastika iraisam-pirenena misy akora sy rafitra maro karazana dia novokarina sy nampiharina tany Shina. Tamin'ny andro voalohany dia be ny fantsom-plastika PVC ao Shina. Nampiasaina indrindra ho an'ny fantson-tariby elektrika sy fantsom-pako. Na izany aza, ny fantsom-pifaninanana PVC dia misy lesoka sasany amin'ny fanoherana ny fanala, ny fanoherana ny hafanana ary ny tanjaka. Ny tahan'ny fitomboan'ny tsena dia ho ambany noho ny fantsom-plastika vaovao (ao anatin'izany ny PPR). , PE, PB, sns.), Ny tahan'ny fitomboan'ny indostrian'ny fantsom-plastika vaovao dia nihoatra ny 20%, izay nanjary fitarihan'ny fantson-tsolika China.